फ्रान्स हिल्लिंगले सस्तो संसारलाई मूर्ख बनाउँछ कि मनोचिकित्सकलाई चिन्तित सोचाइ? मार्टिन भिजल्याण्ड
यो वास्तवमा यो प्रकारका जोडेहरूलाई बेवास्ता गर्न राम्रो छ, तर फ्रान्सेली हिस्लिंगा अहिले धकेलिएको छ वैकल्पिक मिडिया र मुख्यधारा मीडिया, तपाईंलाई यो नाम दिनुपर्छ। त्यहाँ जाहिर छ एक नयाँ PsyOp (मनोवैज्ञानिक सञ्चालन) रणनीतिहरु कुनै पनि प्रकार को महत्वपूर्ण सोच को लिंक गर्न को लागी शुरू गर्यो पागल विचारहरू। The 'सस्तो पृथ्वी' रणनीतिहरू। संयोग, मेरो यो आविष्कारकहरूको लागि धेरै आदर छ। आखिर, यो जान्न राम्रो छ कि तपाईं त्यस्ता PsyOp सँगै राख्न र यसलाई धेरै ध्यान आकर्षित गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। यो आश्चर्यचकित छैन कि धेरै मानिसहरू आफैले यो ऋण दिन्छन्। पैसा वार्ता?
यो संदिग्ध छ कि फ्रान्सेली हिल्लिंगले वास्तविक नाम हो कि छैन यो जोडा तर उनी कम्तीमा अनुयायीहरूको एक टोली आफ्नो निपटानमा लाग्छिन्। सम्भवतः पैसा पूँजीको साइजको बारेमा केहि भनिएको छ जुन त्यस्ता PsyOp परियोजनाहरूमा राखिएको छ। फ्रान्स र तिनका सहयोगीहरू (अनुयायीहरू) जाहिरा तौर पर पहिले नै ज्ञात स्टिग्मा "साजिश विचारधाराहरू", तर त्यसपछि संस्करण 2.0 अन्तर्गत चिन्तित सोचको जाँच गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो नयाँ पीढ़ी साजिश विचारधाराहरू सहि पृथ्वी, खोखरी पृथ्वी, होलोग्राफिक विमानहरूमा विश्वास गर्दछ जुन केवल वरपर चारैतिर उक्लिएको छ। आदि उद्देश्य सबै चीजहरू खिच्न सक्छ जुन सम्भवतः idiocy को कुनामा साजिश हुन सक्छ।
एउटा उदाहरण: टोनी ब्लेयरले 'जननिर्माणको हतियार'त्यो इराक मा पाइएको थियो। यो 'जननिर्माणको हतियार"त्यसपछि इराकमा युद्ध सुरु गर्ने कारण थियो। त्यो 'साजिश सोच' होइन, तर त्यो प्रदर्शन गरिएको छ। मा मुख्यधारा मीडिया यो अचम्मको रूपमा भर्ना भएको थियो। जो मान्छे यस वर्ष को बारे मा लिख ​​रहे थिए 'साजिश सोचा' को रूप मा संदर्भित गरियो, तर फिर्ता मा यो बाहिर आए कि वास्तव मा इराक मा हमला गर्न को साजिश थियो। त्यसैले एक साजिश सही रूपमा फेला पर्यो। The 'जननिर्माणको हतियार'अवस्थित थिएन; यो मान्छेलाई इराकको आक्रमण आवश्यक थियो भनेर समझाउन डिजाइन गरिएको एक साजिश थियो। उदाहरणका लागि, त्यहाँ अन्य विषयहरू छन्, शुद्ध महत्त्वपूर्ण विश्लेषणको माध्यमबाट, निष्कर्ष निकाल्ने कि त्यहाँ एक साजिश हुन सक्छ। यसका लागि मुख्य स्ट्रीममिडिया र राजनीतिज्ञ जो जिम्मेवार छन्, तथापि, प्रायः मात्र यसलाई स्वीकार्नु भएको बेलामा घटनाले पहिले नै एक पीडित पहिले राखेको छ: यसलाई अब कुनै रूस्टर कुकिंग छैन। तिनीहरू अक्सर आफ्नो काम गर्न जारी राख्न सक्छन्। कसैले नोटिस गर्दैन, कसैले हेरचाह गर्दैन।
यद्यपि यो असंभव रहेको छ कि मार्टिन व्रिजल्याण्डका महत्वपूर्ण वेबसाइटहरू अवस्थित छन्। तपाईं साँच्चै मान्छे आफैलाई जाँच गर्न सबै प्रयास गर्न चाहनुहुन्न। यो धेरै राम्रो छ यदि तिनीहरू सजिलै नियन्त्रणमा रहेका मिडियाबाट बाहिर आउँछ भन्ने विश्वास गर्छन्। भन्दा राम्रो हुन सक्छ यदि तपाई भविष्यमा आफैलाई अनुसन्धान गर्नदेखि रोक्न सक्नुहुन्छ? के यो उपयोगी छ कि यदि यो छवि स्केच गरेर यो रोक्न सक्दछ कि महत्वपूर्ण विचारकर्ताहरूको यो समूह बेवकूफको रंगीन समूह अन्तर्गत छ? यसलाई आध्यात्मिक स्पर्श दिनुहोस्। यसलाई सानो तुरुन्त बनाउनुहोस् र तपाईंले गर्नुभयो।
यस क्षणमा हामी एक आन्दोलनको बलियो वृद्धि देख्छौं जुन 'साजिश सोच' को घोरमा 'महत्त्वपूर्ण सोच' लिन्छ जस्तो देखिन्छ, तर त्यसपछि पुरा तरिकाले पागल विचारहरु। यो सुनिश्चित गरेर कि नियन्त्रित वैकल्पिक मिडिया र मुख्यधारा मीडिया यो समूह लाई धेरै ध्यान दिनुहोस, तपाईं बाहिर जान्छ कि बाहिर को दुनिया मा सोचता छ: "कुखुरा, एल्यु-टोटे अलार्म!"निस्सन्देह, त्यो प्रवृति पहिले देखि नै सुरु भएको थियो, तर भर्खरै हामी यो ओभरडाइभमा जान्छौं। यसले प्रभाव पार्छ कि जुनसुकै सोचाइलाई पागल व्यक्तिको समूहको रूपमा परिभाषा वर्गीकृत गरिन्छ। र यो बुझ्न योग्य छ यदि तपाईं मूर्खता देख्नुहुन्छ कि यस आन्दोलनले उत्पन्न गर्दछ। त्यसैले मैले मेरो फेसबुक पेजको अधिसूचनामा देखेँ कि कसैले मलाई ट्याग गरेको छ यो चलचित्र कसैबाट आफैले फेसबुकमा नाफ्तीली स्जिभलाई बोलाउँछन्। आफैलाई सार्थकतामा हेर्नुहोस्; सम्भवतः यो थप स्पष्टीकरण आवश्यक छैन।
Naphthali Disc बाट मार्टिन भिजल्याण्ड on Vimeo.
यो निश्चित छ कि यहाँ कस्तो दृष्टिकोण छ। कहिलेकाहीं प्रविधिहरू राम्रोकहिलेकाहीं होइन वा कहिलेकाहीं ठूलो वा कम हदसम्म कंक्रीट अस्तित्व, यी 'फ्लैट पृथ्वी' अनुयायीहरू जसरी वरिपरि घिमिरेको हुनुपर्दछ जुन सबैको हँसिलो हाल्छ। र निश्चित रूप देखि यो केहि असंभव विचारधारा विचारहरु को विचार देखि जोडन सक्छ कि कुनै विमानहरु 911 मा जुडवां टावरहरुमा उजागर गरे, तर यो एक होलोग्राफिक प्रक्षेपण थियो। खैर, के कुनै बेवकूफ सिद्धान्तहरू शुरुवात गरिएन, गम्भीर शोधकर्ताहरूले आफूलाई सीमित पारे वास्तवमा अवलोकन बरु विलोली रिक्साहरूमा हिँड्नुको सट्टा। प्रसारणमा हामीले पाउनु भएको देखे राम्रो तरिकाले सम्बन्धित सोच सबै फ्लैट पृथ्वी बेवकूफहरु को एक नै ढेर मा एक साथ पसीरहेका थिए। यही कारणले गर्दा मेरो अघिल्लो लेखमा फ्लैट पृथ्वीको बारेमा यो मलाई ठूलो देखिन्छ कि ग्यासमा साजिश विचारकर्ता 2.0 (PsyOp actors) को नयाँ समूहलाई ठूलो जडान गर्न। बेशक हजुरआमा, किनकि हामी तिनीहरूलाई हँसिलो राख्न चाहन्छौ र म त्यो प्रकारको जोडेका लागि गर्छु।
यस विषयमा4लेखहरू खर्च गरे पछि, यो फेरि पर्याप्त ध्यान दिइएको छ। तपाईसँग सम्बन्धित हुनुभन्दा अघि तपाईं किल्लामा आगो निस्क्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि, म डराउँछु (नियन्त्रण) वैकल्पिक र मुख्यधारा मिडियाले यो व्यर्थ धेरै धेरै धक्का गर्नेछ। अब तपाईं बुझ्नुहुन्छ। का लागि समय वर्गहरू बन्द गर्नुहोस्।
स्रोत लिङ्क सूची: niburu.co, telegraaf.nl, indepentent.co.uk, soaaids.nl
वैकल्पिक विकल्प मिडियाको लागि राज्यले देरी स्टोककल जस्तै पूर्ण बेवकूफहरू सुरु गर्छ
ट्याग: साजिश सोच, साजिश विचारक, साजिश विचारकर्ता, विशेष, फ्रान्स हिल्लिंग, नाफाली डिस्क, सस्तो पृथ्वी, सिद्धान्त
6 जुलाई 2016 मा 20: 27
त्यो केटी नाट्टेल स्किजले कस्तो दुखाइको मामला
यो 'यो विमान' होइन, तर त्यो विमान, टोपी!
सायद एक बहुसास्कृतिक विद्यालयको परिणाम हो।
6 जुलाई 2016 मा 20: 49
6 जुलाई 2016 मा 21: 26
सबै राम्रो प्रशिक्षित शल्स र टोलहरू यहाँ र मेरो फेसबुक पेजमा हटाइएका छन्, त्यसो भए पनि यो मार्टिन होर्स्ट, जसले फेसबुकमा ("PsyOp कर्मचारी") फ्रान्सेली Heslinga लाई आफ्नो "असल मित्र" को रक्षा गर्न सबै भन्दा राम्रो गर्नका लागि आए तर यो PsyOp मा पार गर्न।
यस मनोचिकित्सक केटालाई तपाइँको अपमानजनक अभिनय र तपाईंको योगदानको गहिरो शर्मिला जानुहोस्। तपाईं बाहिर जानुहुन्छ राम्रो गर्न चाहानुहुन्छ र YouTube मा सुन्दर सम्पादनहरू पोस्ट गरी यो बकवासको प्रचार गर्नुको सट्टा सत्य बोल्नुहोस्। यो PsyOp को लागि मात्र 1 समाधान हो र यो कडा मेहनतको चट्टान हो। तपाईं 'फ्लैट पृथ्वी' अनुयायी होइन भनेर भन्नलाई आफैलाई निर्मल बनाउने प्रयास नगर्नुहोस्। त्यसोभए तपाई आफैलाई यो पनि गर्न हुँदैन। Capiche?
POWNED भिडियो को लागी केवल बीउहरू बीउ हुन् जुन आलोचनात्मक सोचका सबै व्यक्तिहरू साजिश विचारधारीहरू र बेवकूफहरू हुन् जसले सपाट पृथ्वी / फ्लैट पृथ्वी सिद्धान्तमा पछ्याउँछन् र तपाईंले त्यसो गरेका छन्।
7 जुलाई 2016 मा 05: 15
अत्यधिक कुशल मनोचिकित्सक, जसले आफैले खोजी पत्रकारलाई बोलाएको छ, मार्टिन होर्स्ट भन्छन्, "यो मेरो लागि POWNED द्वारा प्रश्नको लागी एक आश्चर्यचकित थियो।"
उनले सम्भवतः आश्चर्य गर्थे, तर कुनै पनि, हामी पनि यो झूटो छ भनेर मान्न सक्छौं।
7 जुलाई 2016 मा 23: 58
मैले मार्टिनलाई फोन गरेर बोलेँ। मार्टिन भन्छिन् कि उनले पाउन्डलाई एउटा ई-मेल पठाएको छ जसमा उनी भन्छन् कि उनी प्रसारणमा देखा पर्दैनन्। उनको मोबाइलको भिडियो र स्क्रिनसट जसले उनले प्रमाणित गर्न पठाउँथे, वास्तवमा मलाई प्रमाणको रूपमा साँच्चै निष्कर्षमा छैन, किनभने भिडियो अत्यन्तै धमिलो छ र यसमा डेटा मेरो लागि दृश्यात्मक छैन। तर, मान्नुहुन्छ कि मार्टिनले वास्तवमा पाउन्डको लागि एउटा इमेल पठाउनुभएको छ, यसले हुन सक्छ कि उसले पाएनएनड प्रसारणमा अनियमित रूपमा समाप्त हुन सक्छ।
मार्टनले भने कि उनीहरूलाई एकदम सस्तो पृथ्वी समर्थक होइन र त्यो त्यहाँ फ्रान्स हस्पलिङ्गको अनुरोधमा घटनाको चलचित्र त्यहाँ थिए।
13 जुलाई 2016 मा 05: 39
यो कम से कम अत्यंत उल्लेखनीय छ कि सच्चा खोजकर्ताको रूपमा - र मार्टिन भन्छिन् कि त्यो जान्दछ कि पृथ्वी राउन्ड हो - तपाई फ्लैट कानुनहरु लाई धेरै सक्रिय सहयोग प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ।
यो RAARRRR छ। त्यसो भए पनि अचम्म अचम्म लाग्यो कि सबै मनोचिकित्सक घंटी बजाउनु पर्छ।
13 जुलाई 2016 मा 06: 43
6 जुलाई 2016 मा 22: 03
चिल्लो (समृद्ध यूरेनियम स्प्रे हाहा), तपाईले के गर्नुभयो भन्ने झण्डै आधे सत्यहरू मिश्रण गर्दछ।
7 जुलाई 2016 मा 00: 51
म थोडा थोडाको लागि मार्टिन पछ्याएको छु। यो कोर नजिक छ। केवल उनले अन्तिम मिनेट हाहामा बर्तन निकालेको थियो। बकवास पूरा गर्नुहोस्। फ्रान्स हेल्लिंगाजस्तै। तर हो, तपाईसँग साँच्चै पागल छ। मैले पनि एक जना केटीलाई चिन्ता गरेँ जसले रूखहरूमा दस्तुर गर्यो। र यो ठीक तरिकाले यस्तो अस्थिर मान्छे हो जुन प्रायः मिडियामा दुर्व्यवहार गरिन्छ र एक चरण दिए।
7 जुलाई 2016 मा 04: 11
मार्टिन होर्स्ट एक विनाशकारी र डरलाग्दो छ।
यस स्थान को पेटोरेडियो सम्म भएको थियो र अल्बडो प्रबंधन को बारे मा कुरा गरदै थियो, अलार्म घंटी पहिले नै मेरो लागि बजिरहेको थियो, त्यसपछि मैले केहि भिडीयो देख्यो र यो स्पष्ट हो कि त्यो एक डिफिनो एजेन्सी र एक शरारती छ।
उनले सबै कुराबारे कुरा गर्न ध्यानपूर्वक सुन्नु, हामी कसरी सिक्न सक्नुहुन्छ कि कसरी यस्ता प्रकारहरू सजिलै अनमास्क गर्न सक्नुहुन्छ।
मेरो लागि यो तुरुन्तै संदेह थियो कि ऊ माथि भिडियो मा भिटिटी द्वारा साक्षात्कार गरिएको थियो
त्यो मानिस हो जुन सार्वभौम व्यक्तिलाई बढावा दिने थियो / म मेरो नाम दावी गर्छु र त्यसपछि उसको गहिरो घुमाउन चाहन्छु। यो भनेको हो, यो काम गर्दैन।
यस्तो प्रकारले Dr.judywood लिटमस परीक्षण पनि गर्दैन (checktheevidence.com हेर्नुहोस्)।
यदि हामीले सबैलाई समयमा उपर्युक्त लिटमस परीक्षण गरेका थियौं (त्यसैले यसैले 911 राम्रोसँग अन्वेषण गरिसकेको थियो) भने नगरी भिडियोहरू बेवास्ता गर्नुपर्नेछ, त्यसपछि हामीसँग यी समस्याहरू सँगै Flatearthers छैन।
छोडेका थिए र हामीसँग यी समस्याहरू फ्लोरिवारमा थिएनन्।
6 जुलाई 2016 मा 22: 31
7 जुलाई 2016 मा 08: 19
नाफ्फाली यद्यपि यहूदी नाम हो। यहूदीहरूलाई गोयमलाई मार्ने र अगाडि उडाउन अनुमति दिइएको छ। उनले भर्खरै थप अभिनय पाठहरू लिन र डच भाषाको साथ ग्रिडहरूमा पाउँदछ, तर सम्भवतः त्यो चाँडै एलियन्सद्वारा लिइनेछ।
यो केहि पनि होइन कि मार्टिन होर्स्टसँग त्यस्ता पक्षपातहरू छन्। मलाई यस्तै कुरामा संदेह छ। Goyim जनावरहरू जस्तै छन्।
7 जुलाई 2016 मा 13: 32
त्यो भिडियोमा त्यो केटीले झूट बोकेको छ कि त्यो खराब अभिनेत्री हाहाहा लम्फाउ कमबखत छ।
यदि प्रश्नमा सिद्धान्तको मूल्य थियो भने, यो स्थितिमा कुनै पनि शैलीको ट्रलले MSM मा कहिल्यै सम्बोधित हुने छैन। जानकारी (= प्रोग्रामिंग) को माध्यम ले सम्पूर्ण आबादी को हेरफेर गर्न को लागी कितना आसान देखने को लागि अविश्वसनीय।
त्यो फ्लैट पृथ्वी सिद्धान्त एक लामो समयको लागि नजिकै छ, कहिल्यै ध्यान दिएन। अब यो एक "स्पिन" सिर्जना गर्न राम्रो छ र यो ध्यान दिइन्छ। यसलाई कसरी खेलाइएको छ भनेर हेर्नको लागी राम्रो छ, विशेष गरी जब यो पटक्कै गर्न सजिलो छ।
मार्टिन पनि एक राम्रो हार छ, के तिमी सोच्दैनौ?
7 जुलाई 2016 मा 17: 54
ओहो आधिकारिक ... ठीक छ हामी पहिले नै थाहा छ
7 जुलाई 2016 मा 21: 35
यो केवल मीठा छैन के मैले गरे
11 जुलाई 2016 मा 06: 31
प्रिय केटा, पहिलो स्थानमा, तपाईं चर्चमा विश्वास गर्नुहुन्छ।
तपाईंको प्रेमिकाले उनको मक्खी हेर्न र मिठो हुँदैन भन्ने कुरा बताउँदछ, किनभने त्यो वैकल्पिक मिडियामा धेरै हानि हुन्छ।
वा त्यो उनीहरूलाई साँच्चै मक्छ र त्यसपछि त्यो एकदम समस्या हो।
यदि तपाईंले उनीहरूलाई उडान देख्नुहुन्छ कि स्काइफोफ्रेनको संकेत गर्न सक्नु हुन्छ। म यो कुरा नगर्ने हो तर मानवताबाट।
तपाईं अहिले पनि समयमै हुनुहुन्छ, त्यसैले म मनोचिकित्सकको भ्रमणको सिफारिश गर्नेछु।
र फ्रान्सेली Heslinga आफ्नो फ्लैट पृथ्वी संग पागल बनाउन छैन। उहाँले एक मनोचिकित्सक प्रदर्शन गर्दछ।
उहाँ जान्नुहुन्छ कि पृथ्वी फ्लैट छैन।
जब मैले एक वर्ष पहिले सहि पृथ्वीबाट सुनेको छु, मैले तुरुन्तै अन्वेषण गर्न थाले, किनकि हामी सबै कुराको साथ खराब भएन, यो खोजीको लागी लाग्दछ।
1 दिन अनुसन्धान गरे पछि, मलाई थाहा थियो कि यो गलत थियो, र मैले बुझें कि यो अगम्य मनोचिकित्सक (मनोचिकित्सा = मनोवैज्ञानिक संचालन)
र यो एक साजिश हो।
नियमित मीडियाले ध्यान दिनुपर्ने तथ्यले पर्याप्त भन्छ।
मार्टिनको विश्लेषण सही छ। हिल्लिंग एक psy opper हो।
यसैले हेल्लिंगा एक वास्तविक मूर्ख होइन, तर मूर्ख बनेको छ।
त्यहाँ मानिसहरू जो यो दिमागको लागि खस्छन्, ती विश्वासीहरू, मिठो तर बेवकूफ मानिस हुन्।
यहोवा पनि भ्रामक, प्यारी तर बेवकूफ मानिसहरू छन्।
उनी आफैको लागि सोच्न सक्दैनन् ..
सहि पृथ्वीबाट मूर्ख नगर्नुहोस् र उ-पाई-ओप्स, तथाकथित प्रकाशकार्यकर्ता र च्यानेलर प्रिय केटा। तिनीहरू सबै चीटहरू हुन्। मार्टिन होर्स्ट तिनीहरूमध्ये एक हुन्।
यी तथ्याङ्कहरू जान्न हामीलाई सबैले विनाशमा मदत गर्छन्।
केहि वास्तव मा उलझन हुन सक्छ। म एक एन्टोन ट्युबेन भन्छु,
साथै एक जना मीठो मानिस। तर ढोकाको रूपमा पागल जस्तो, उनले देखेको छ सालोंका लागि। यो हो जस्तो छ।
म यसलाई अझ सुन्दर बनाउन सक्दिन।
11 जुलाई 2016 मा 07: 10
Naphtalie को मित्र,
तपाईंको यूट्युब भिडियोमा "शान्ति र प्रेम एक आधारको रूपमा" तपाइँ भन्छौं कि तपाईं हामीलाई अन्तर्वार्ताहरू साझा गर्न चाहनुहुन्छ।
यस लेखमा मार्टिन शेयरहरू भनेको अन्तर्दृष्टि हो: त्यहाँ खतरनाक मनोचिकित्सक छ, सस्तो पृथ्वी भनिन्छ। त्यसोभए गम्भीर गहिरो।
11 जुलाई 2016 मा 07: 12
11 जुलाई 2016 मा 21: 47
12 जुलाई 2016 मा 14: 10
12 जुलाई 2016 मा 14: 20
25 जुलाई 2016 मा 16: 50
अर्को व्यक्ति जो PowNed भिडियोमा देख्न सकिन्छ ... शान अलार्म ... जेफरी वोंक
26 जुलाई 2016 मा 00: 56
डिसिनो, खोज, शिल र अधिक
9 जुलाई 2017 मा 05: 23
आज msn.com/france मा फ्लैट पृथ्वी psy-op मार्फत आत्म-विचारकहरूमा आक्रमण।
त्यसैले फ्रान्समा पनि, डिफिनओफ साजिश साइटहरूले आफ्नो विनाशकारी काम गरेका छन् र नियमित सञ्जाल बाँकी रहेका छन्। हेर्नुहोस्: "ला टेरे est थाली र एक तस्वीर मा छ प्राइभर! "(पृथ्वी फ्लैट छ र यो फोटोले साबित गर्दछ) त्यसैले हामी सबै ठाँउहरू त्यस्ता ढाँचा देख्छौं, त्यस्ता रणनीतिहरू।
धन्यवाद यूट्यूब ('थम्ब्स अप' र trolls र प्लेटफार्म प्रमुखहरू जो वास्तवमा यसको विश्वास र प्रतिक्रियामा व्यक्त गर्दछ हेरफेर गरेर।)
« मानिसहरू अब स्वतन्त्र रूपमा विचार गर्न सक्षम छैनन्
टोनी ब्लेयर र क्याबिनेट ब्लेकनेन्डले मलाई नरसंहार इराकलाई जटिल बनायो »
कुल भ्रमण: 2.538.146
मार्कोस op कोरोना क्रिसिस कोविड -१ 19 २०० MS एमएस ब्लास्टर भाइरस बिल गेट्स अभिनीत याद ताजा गरीरहेको छ
बम खतरा op कोरोना क्रिसिस कोविड -१ 19 २०० MS एमएस ब्लास्टर भाइरस बिल गेट्स अभिनीत याद ताजा गरीरहेको छ
Bounz op आईफोनले भर्खरको आई-ओएस १.19..13.5 अपडेटमा कोविड १-अनुप्रयोग लुकाउँछ